အခမဲ့အဘို့ရေသောက်သတိပေးချက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ရေသတိပေးချက်မသောက်ရ
ရေသောက်သတိပေးချက်အလုံအလောက်ရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေးနေပါတယ်။ သငျ့လျြောသောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကျန်းမာသင့်ရဲ့အသားအရေကိုစောင့်သင်အလုံအလောက်ရေကိုသောက် weight.Do ဆုံးရှုံးကူညီပေးသည်?
တစ်ရေ tracker app ကိုသငျသညျရေသောက်ကောင်းအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးကူညီရန် - သင်ရေသောက်သတိပေးချက်လိုအပ်ပါတယ်!
ဤရေ tracker app ကိုဓါတ်ကိုပြန်လည်သင်သည်စောင့်ရှောက်ဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေးနေပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာလက်ရှိအလေးချိန်ထည့်ပါ, ရေသောက်သတိပေးချက်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နေ့တိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရေဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ app ကိုသငျသညျရေခွက်ကိုသောက်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် update လုပ်ဖို့သတိရပါ။ ဒါကြောင့်အခြားသောက်စရာဘို့အချိန်ရသောအခါထိုအခါ app ကိုသငျသညျကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအထောက်အသငျသညျကိုမသောက်သောအရာကိုခြေရာခံ, ဒါပေမယ့်လည်းဒါကြောင့်အခြားသောက်စရာဘို့အချိန်အခါသင်သတိပေးသာ။
* ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် Stay နှင့်မထိုက်မတန်စောငျ့မတျောမူ ရေကယ်လိုရီအခမဲ့
အခါဘယ်လောက်ရေနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးသောက်ရရန်သင့်အားသတိပေးလိမ့်မည် * ရေ tracker
* သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ဖလား, စံ (အောင်စ) သို့မဟုတ်မက်ထရစ် (ml) ယူနစ်
* သင်ဟာတစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်ရေကိုသောက်ရန်သင့်က start နှင့်အဆုံးအချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်
* Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူအလေးချိန်ဒေတာထပ်တူပြုပြီး။
* S ကကနျြးမာရေးနှင့်အတူရေဒေတာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့သောက်ရထပ်တူပြုပြီး။
* သင်ကသင်၏ Google အကောင့်မှတဆင့် login နိုင်ပါတယ်။
* သင်ကရေ tracker အားဖြင့်သင်တို့၏သောက်ရေ data တွေကို backup လုပ်ထားနှင့် restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နေ့တာနေ့ကမှဘဝမှာတော့ပုံမှန်သောက်ရေက၎င်း၏မြောက်မြားစွာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိနေသော်လည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရေ tracker app ကိုလွယ်ကူစွာဓါတ်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ရန်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သူကတောင်သင်ကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်အချို့သောရောဂါတားဆီးကိုကူညီလိမ့်မည်။
ရေသောက်သတိပေးချက်လုံခြုံတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်လုံခြုံရေးမေးခွန်းများကိုရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
7.55 ကို MB